सुहाउँदैन लासमाथि कुर्सी
नागरिकको चाहना थियो । स्थिर सरकार अनि समृद्ध मुलुक । जनताले काँग्रेस कम्युनिस्ट हेरेनन् । जसले यो देश बनाउन सक्छ जस्तो सोचे, त्यसैलाई मत दिए । लामो समयपछि मुलुकले स्पष्ट बहुमतप्राप्त सरकार पायो । अब देश समृद्ध बन्ने सपनामा जनता...
प्रधानमन्त्रीज्यू ! यहाँ अस्वस्थ हुनुहुन्छ, थाहा छ । सम्भावित कोरोना सङ्क्रमणका जोखिम हुनुहुन्छ । सबैभन्दा बढी त कमजोर स्वास्थ्यका कारण । अनि बालुवाटारमा छिरिसकेको कोरोना भाइरस यहाँको ओछ्यानसम्म पुग्न सक्ने सम्भावित कारणले । प्रधानमन्त्रीज्यू ! हुनत यहाँ सर्व ज्ञाता हुनुहुन्छ...
मेरो सहर आफ्नै पुरानो रफ्तार समात्न आतुर छ । केहीमहिनादेखि सोच्दै थिए, यो नैमेरो सहर हो कि होइन भनेर । लाग्थ्यो, म हुर्किएको सहरमा यस्तो मुर्दा शान्ति कहिल्यै छाएको थिएन ।एकाबिहानै भूकम्पले झट्का दिँदा त पक्कै यो मेरै सहर रहेछ...
हिजोआज म फेरि सपना देख्न थालेको छु । विरहका पहाडमा मायाका गीत गाउन थालेको छु । मिठा नमिठा सपना पनि देख्न थालेको छु । कथानक सपना । मिलनका अनि बिछोडका । ००० सपना देख्छु अनि फेरि मन बरालिन थालिहाल्छ ।...
कति दुखका कथा मात्र । कति मृत्युका कुरा मात्र । केही रमाइला क्षण सम्झिन मन लाग्छ । तर, चारै तिर हेर्छु । निराशा मात्र छ । मौनता मात्र छ । चारै तिर मृत्युका त्रास बढ्दै छन् । अनि कसरी फुर्न...
म झुक्छु मात्र आफ्नै अहङ्कारसँग
साँच्चै भनेको ! अहिलेका बाउआमाका पुस्ता भएका भए मेरो जन्म असम्भव झैँ थियो । ११ जना छोरा र छोरी जन्माइ सकेका मेरा बाबाममीलाई के सन्की चढ्यो कुन्नि ? मलाई जन्माए । त्यो पनि हुन सक्ला, बाबाममीको गल्तीको परिणाम हुँ, म...